१५ जेष्ठ २०७६ बुधबार
गोरखाको एक शान्त गाउँमा खासखुस चल्यो । घरमा अभिभावक अत्तालिएका सुनिन्थे । त्यसको कारण एउटा चिट्ठी थियो, जो सोह्रौँ कर्मापाबाट ती अभिभावकले पाएका थिए । आठ वर्षको छुकुछुके बालकलाई छोक्न्यी रिन्पोचेको तेस्रो अवतारका रुपमा ठम्याइएको जो थियो ।
त्यसको चार वर्षपछि ती बालकको बेग्लै यात्रा प्रारम्भ भयो । गुरुको निगरानीमा तासिजोङ गुम्बाभित्र बालकले झन्डै एक दशक कडा प्रशिक्षण पायो । छोक्न्यी रिन्पोचेको यो अवतार संसारलाई मार्गदर्शन गर्न तयार भयो । अहिले ऊ संसारको फन्को लगाइरहेछ ।
तिब्बती बौद्धमार्गअनुसार प्रथम छोक्न्यी रिन्पोचेले आफ्ना गहनतम् विद्या सबभन्दा विश्वासपात्र शिष्यलाई हस्तान्तरण गरे । तीमध्ये धेरै डुक्पा–काग्यसु तथा न्यिङ्मा परम्पराका शिष्य थिए । उनीहरुले त्यो विद्या फेरि उनको अर्को अवतारलाई दिए । तिनले फेरि आफ्ना विश्वासपात्र शिष्यलाई । यिनै शिष्यले गुरुको अर्को अवतार मानेर त्यो विद्या गोरखाको त्यही चुलबुले केटोलाई दिए, जो आफ्नै साथीसंगीसँग खेल्न, उफ्रिन र दगुर्न मन पराउँथ्यो ।
तिनै रिन्पोचेले एरिक स्वान्सनलाई साथमा लिएर लेखेको ओपन हाट ओपन माइन्डको नेपाली अनुवाद हो, चित्त खुलोस् हृदयसँगै । हिमालयको काखमा बसेको नेपाल तन्त्र, मन्त्र, रहस्य, सनातन आध्यात्मिक अभ्यास र बुद्ध परम्पराले ओतप्रोत छ । ध्यानीहरुको ध्यानभूमि जो हो यो । यसैले त नेपालीलाई शान्त चित्त भनिन्छ । नेपालीमा न्यानोपन छ । यहीँ छ, विश्रान्ति पनि । आम रुपमा खुसी र सुखी पनि भनिन्छ । कस्तुरीले आफैसँग भएको बिना अरुतिर खोज्दै हिँड्नु बेग्लै कुरा हो किनभने हामीमध्ये धेरैको यही स्थिति छ ।
कहिलेकाहीँ अत्यन्त बहुमूल्य चीज आफूले गुमाएजस्तो लाग्छ हामीलाई । आफूबाहिर त्यो चीज खोजिरहेका हुन्छौँ । जहाँ गए पनि त्यो चीज आफूसँगै छ भन्ने कुराको बोध भने हुँदैन । यो हो, आम मान्छेको जिन्दगी । यी गुरु यही बोध गराउँछन् । यसैतिर संकेत गरेको भावमा किताब विमोचनको क्रममा बोधिचित्तवाला यी रिन्पोचेले सुनाए, “म संसारका सबै मानिसलाई भन्ने गर्छु, खुसी हुनु छ भने नेपाल जानू, नेपाल धेरै खुसी भएको देश हो ।”
खासमा यो किताब पश्चिमा जगत्का लागि लेखिएको लेखकले नै उल्लेख गरेका छन् । पश्चिमाहरु बाहिरी खुसीका लागि यताउता दगुरिरहेका छन् । भौतिकताको शिखरमा पुग्न लालायित छन् । हो, जीवनमा यस्तै लालसालाई काँधमा बोकेर हिँड्नेहरुका लागि रिन्पोचेले यो पुस्तक दिएका छन् । उनको आशय हो, जीवनको गति भौतिकताको एउटा पांग्राले मात्र चल्ने होइन, अर्को पांग्रा अध्यात्म पनि हो भन्ने नबिर्स ।
अहिले नेपालमा समृद्धिको नयाँ कथावाचन चलेको छ, जसको जग केवल भौतिकवादको विकासमा अडेको छ । पानीजहाजदेखि रेललाई लिएर बालुवाटारको बलशाली सरकार रेला गरिरहेको छ । मानिसको चित्त शुद्धिको बहस बहिर्गमनमा परेको छ । समृद्धि आउनुपर्छ तर मानवीय मूल्यमा । जुनसुकै संस्कृति र समाजमा पनि यस किसिमको संक्रमणकालमा सन्तुलन गुम्ने खतरा हुन्छ । तर त्यसको बदलामा हामीमा भएको विशिष्ट सद्गुण गुमायौँ भने जित्छौँ कि हार्छौं ? यस्तै प्रश्न गर्छन्, यी रिन्पोचे । यही गल्ती पश्चिमाले गरे । भौतिक पूर्वाधारमा अभूतपूर्व छलाङ त मारे, तर किन उनीहरुमा विक्षिप्तता बढ्यो ?
दुई दशकदेखि संसारभर प्रवचन दिँदै हिँडेका यी सद्गुरु जीवनशैली सिकाउँछन् । शून्यता सिकाउँछन् । प्राञ्जलताबारे बात गर्छन् । ताफ्विक प्रेम हाम्रो निसर्गको अपरिहार्य घटक हो भन्छन् । यही प्रेमसँग पुनर्मिलन यात्राको व्याख्या गर्दै ध्यान विधि सिकाउँछन् । यो किताबमा पनि उनले आफ्नो जीवनयात्रालाई केही ठाउँ दिएका छन् । तर अधिकांश भने ‘म’ भाव, सूक्ष्म शरीर, चित्तानुस्मृति आदिका सम्बन्धमा आफ्नो अनुभव उल्लेख गरेका छन् । किताबले आध्यात्मिक चेत मात्र दिँदैन, ध्यानविधिको अभ्यासमा पनि सँगसँगै यात्रा गराउँछ । यो किताब मान्छेलाई होशपूर्वक बाँच्न सिकाउने गाइडबुक हो । जीवनलाई सम्यक दृष्टिसाथ हेर्न मद्दत पुग्ने प्रयोगशाला पनि ।
जीवनको ऊर्जाशील समय धर्म, संस्कृति, अध्यात्मलाई अफिम भन्दै धारे हात लगाएका लेखक, साहित्यकार तथा चिकित्सक सरोज धितालले रिन्पोचेको पुस्तक अनुवाद गर्नु आफैँमा आश्चर्य हो । धितालले लेखेकै छन्, ‘मलाई चिन्ने मित्रहरु मेरो यो ‘रहर’ देखेर जति अचम्म मान्छन्, म आफैँलाई नै त्योभन्दा बढी आश्चर्य लाग्ने थियो होला । तर यो पुस्तक पढिसकेपछि भने अब त्यति बढी आश्चर्य मलाई छैन । हाम्रो स्वत्वभित्र निरन्तर बलिरहेको प्रकाशबीज विभिन्न कालखण्डमा विविध रुपमा प्रकट हुँदो रहेछ । यो पुस्तक पढ्दापढ्दै तपाईंले पनि त्यो प्रकाशबीजलाई पक्कै देख्नुहुनेछ, भेट्नुहुनेछ ।’
पुस्तक : चित्त खुलोस्, हृदयसँगै | लेखक : छोक्न्यी रिन्पोचे | अनुवाद : सरोज धिताल | प्रकाशक : अल्केमी पब्लिकेसन | पृष्ठ : २५९ | मूल्य : ४५० रुपैयाँ